India: Tehina “SmartCane” Misy SONAR Noforonin’ny Mpianatra Mba Hanampiana Ny Jamba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2014 4:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, македонски, English
Afaka mitondra amin-javatra tsy mampino ny fitambaran'ny teknolojia roa samihafa. Tena nanao zavatra nanintona ny saina tokoa ireo mpianatra ao amin'ny IIT Delhi tamin'ny asa famoronana nataony, dia ny tehina SmartCane, izay mampivady fitaovana faran'izay tranainy indrindra teto ambonin'ny tany — ny tehina fitondran'ny jamba — tamin'ny fametahana SONAR taminy mba hanampiana ireo manana olana amin'ny fahitàna ho afaka mandeha mahaleotena.
Iray isaky ny olona telo jamba manerana ny tany (voavinavina ho 15 tapitrisa eo) no monina ao India. Misy manodidina ny 2 tapitrisa eo ho eo ny ankizy jamba ao India ary 5 isanjaton'izy ireny ihany no nahazo fanabeazana.
Tsy lany olana atrehana ireo olona manana olana amin'ny fahitàna ao India ao, firenena iray izay tena olana manokana mihitsy ny fanànana fahasembanana. Matetika no voatery midina anaty arabe ny mpandeha an-tongotra, satria feno mpivarotra ny sisin-dàlana, na biby, na sàkana hafa. Mampiasa ny tehina efa mahazatra hatrizay ireo jamba, saingy tsy afaka hahita izay zavatra misy ankoatry ny ambanin'ny valahany ireny tehina tranainy ireny. Laharam-pahamehana ho an'ireo mpikaroka marobe manerana izao tontolo izao ny famoronana fitaovana tsotra sy mora mba hanampiana ireo olona tratry ny olana amin'ny fahitàna. Maha-be fanantenana ihany koa ireo asa famoronana toy ny Roshni, novokarin'ireo mpianatra ao amin'ny IIT Delhi, saingy misedra olana samihafa amin'ny resaka fanohanana ka mahatonga fahasarotana amin'ny fanatanterahana ny famokarana azy ho vokatra maro.
Ny profesora Meenakshi Balakrishnan, injeniera iray mpahay momba ny solosaina ao amin'ny IIT Delhi, no mitarika andiany iray ahitàna mpikaroka sy mpianatra mba hamorona ny SmartCane, izay mandefa onjam-peo manana halavàna faran'izay ambony ho adòna amin'ny sakana sy hamerina hovitra ka hampitandrina ny mpampiasa azy. Nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Martsa teo ny fanombohany. Maka tàhaka ny fomban'ny biby ny SmartCane, toy ny ramanavy, izay mandefa onjam-peo ihany koa amin'ireo manodidina azy ary iny no mitantana ny dian-dry zareo amin'ny fampiasàna ny hovitra voarainy. Tsara lavitra noho ny fanairana amin'ny alalan'ny feo ny hovitra, sady izao koa, satria ny feo mety tsy ho re rehefa eny amin'ireo arabe maresaka loatra.
Tehina “SmartCane” tsara sy mora vidy vita ao @iitdelhi ho an'ireo #sembana ara-pahitàna Fatratra loatra ny mahita #asafamoronana ara-tsosialy tahaka izao.
Tsy tahàka ilay asa famoronan'ny Britanika, ilay tehina UltraCane mitentina 985 dolara Amerikana, fa takatry ny rehetra ny SmartCane amin'ny vidiny INR 3000 monja (eo amin'ny 50 dolara Amerikana eo).
Mampiseho ny fiainana isanandron'ny olona iray mpampiasa Smartcane ny lahatsary eto ambany, mamariparitra ireo sedra isankarazany tsy maintsy atrehana:
Natao niaraka taminà mpampiasa niisa teo amin'ny 150 tany aminà tanàna 6 tao India ny fampiharana ho fankatoavana ny Smartcane, ary saiky efa mpampiasa Smartcane isanandro ankehitriny izy rehetra ireo. Ny fitaovana fanofànana/fianarana momba ny SmartCane dia vonona sy azo trohana amin'ny fiteny Hindi sy English, ary amin'ny endriny isankarazany toy ny epub, daisy, braille, clear print, sns.
Araka ny pejy Facebook an'ny SmartCane, hatolotra ho an'ireo olona sahirana tratry ny tsy fahatomombanana ara-pahiàna ao Punjab amin'ny vidiny INR 400 ilay fitaovana, ao anatin'ilay fandaharanasa famatsiana amin'ny ampahany atolotry ny “National Donation Pool”.
Amin'izao fotoana izao ny SmartCane dia azon'ireo mpampiasa atao ny mahazo azy amin'ny alàlan'ny tambajotra iray ahitàna fikambanana 16 ho fanampiana ny jamba manerana ireo fanjakana 12 ao India. Ahitana ankizivavy iray mpianatra eny amin'ny Kolejy, mampiasa SmartCane, ity lahatsary ity :
Manome lisitry ny fanehoankevitry ny mpampiasa azy ny Better India magazine :
“Tena fitaovana manampy tokoa ilay izy, satria tamin'ilay tehina nahazatra taloha dia matetika aho no midona aminà fiara toy ny kamiao, trakitera na fiara fitaterana iombonana. io dia noho ilay tehiko tafiditra any ambanin'ireny fiara vaventy ireny ary dia midona tampoka any aho. Naratra noho ireny fifandonana ireny ny handriko. Miaraka amin'ity fitaovana ity, mahazo fampitandremana mialoha amin'ny alàlan'ny hovitra aho amin'ny sakana mampidi-doza tahaka izany. Manampy ahy ihany koa hamantatra ny fisian'ny biby eny an'arabe izy ity, toy ny omby.” – Ketan avy ao Ahmedabad.
“Tena fatratra izany hoe afaka mandehandeha irery izany. Tsy mila fanampiana avy amin'olona intsony aho rehefa mandeha eny rehetra eny. Faly ery aho mizaka tena irery ankehitriny. Manana fahatokisana ahy izao ny fianakaviako sy ny namako, hoe afaka mandeha tsy miankin-doha nefa tsy ho voadona na haràtra aho.” – Indrani avy ao Mumbai.
Vao haingana, ireo olo-malaza toa an'ilay mpilalao sarmihetsika avy ao Bollywood, Vidya Balan, no tonga nampahafantatra ny SmartCane tamin'ny daholobe.
#VidyaBalan @ Fitsinjaràna & Fanentanana Fampiasàna ny Smartcane! http://t.co/3AlBhNJ7Hj
Satria mitombo ny dokambarotra ho an'ny SmartCane, araka izany dia hitombo ihany koa ny fanantenana amin'ny fihanàhan'ny mpampiasa azy, hahatonga ity fitaovana mahasoa ity ho olona maro no hanana azy eny an-tànany.